‘तीन हप्ताकी छोरीले को’रोना जित्ली भन्ने मैले सोचेकै थिइनँ,’ चिकित्सक र नर्समाथि विश्वास बढ्यो ! – Sanchar Patrika
‘तीन हप्ताकी छोरीले को’रोना जित्ली भन्ने मैले सोचेकै थिइनँ,’ चिकित्सक र नर्समाथि विश्वास बढ्यो !
July 14, 2020 213
एजेन्सी- स्कटल्याडमा ३ हप्ताकी को’रोना सं’क्रमित शिशु उपचारपछि निको भएर घर फर्किएकी छन्। उनी सोमबार दुई पटक जाँच गर्दा कोरोना भाइरस नेगेटिभ आएपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएकी हुन्। ३ हप्ताकी शिशु प्याटन मगुइरे मार्च २६ मा जन्मेकी थिइन्। उनी समयभन्दा आठ हप्ता पहिले नै जन्मिएकी थिइन्। जन्मदा उनको तौल डेढ किलो मात्र थियो। श’ल्यक्रियामार्फत् उनको जन्म भएको थियो। उनलाई ‘प्रि-एक्लेम्सिया’ भएकोले पहिलो हप्ता इन्क्यूबेटरमा राखिएको थियो। उनलाई हल्का खोकी लागेपछि जाँच गर्नेक्रममा कोभिड १९ को सं’क्रमण भएको पाइएको थियो।
उनकी आमा ट्रेसी मगुइरे आफ्नो तीन हप्ताको छोरीको नाकबाट को’रोना भा’इरसको परीक्षण लागि स्वाब निकाएको अझै पनि सम्झिन्छन्। जुन दृष्य हेर्न उनलाई निकै गाह्रो भएको थियो। ‘त्यो पहिलो पटक थियो मैले छोरीको आँखामा आँसु देखेको। त्यो बेलामा मैले उसलाई समातेकी थिएँ। म रोइरहेको थिएँ। त्यो बेलामा हामीले एकअर्कोलाई सहारा दिएका थियौं।’ प्याटनमा अप्रिल १५ मा कोरोना भाइरस सं’क्रमण भएको पुष्टि भएको थियो। त्यतिबेलामा उनका आमाबुबालाई पनि आइसोलेसनमा बस्न भनिएको थियो।
कसरी थाहा भयो को’रोना सं’क्रमण?
‘पहिलो हप्तापछि छोरीलाई नुहाउने बेलामा हल्का लक्षण देखापरेको थियो। जुन सामान्य लक्षण भएकाले को’रोना नै हो भनेर पहिचान गर्न मुस्किल थियो,’ ट्रेसीले बिबिसी रेडियो स्कटल्यान्डको प्रोग्राममा भनेकी छन्। छोरी देशकै सबैभन्दा कान्छी कोरोना सं’क्रमित भएको थाहा पाउँदा साह्रै पी’डा महसुस भएको आमा ट्रेसीले बताइन्। ‘डाक्टरले मसँग छोरी ठिक छ भन्दै नआत्तिन आग्रह गर्दै सान्त्वना दिनुहुन्थ्यो,’ ट्रेसीले ती दिन सम्झिइन्। ‘ऊ निकै स्वस्थ देखिन्थी। मैले सोचेकी थिएँ, कसरी भाइरसको संक्रमण भयो होला र?’ उनी भन्छिन्, ‘यति सानो मान्छेले कसरी यो रोगसँग ल’डेर जित्ली भन्ने त्यो बेलामा मैले सोचेकै थिइनँ।’
प्याटनको फोक्सो बलियो बनाइराख्न ‘स्टेरोयड’ दिइएको थियो। नर्सहरुले उनीलाई राम्रो सँग हेरविचार गरेका थिए। हुन त छोरी जन्मदा गरिएको श’ल्यक्रियापछि ट्रेसीलाई घर जान आग्रह गरिएको थियो। १४ दिनसम्म बच्चीसँग अलग बस्न आग्रह गरिएको थियो। ‘चिकित्सकसँग फोनमा अनुरोध गरेकी थिएँ, म आफ्नी छोरीसँग टाढा रहन चाहन्नँ। अरुले जतिसुकै रेखदेख गरेपनि म उसकी आमा हुँ। उसलाई यदि सामान्य खो’की लागेको भएपनि म उसैसँग बस्न चाहन्छु,’ ट्रेसी बताउँछिन्।
चिकित्सकले उनलाई त्यहाँ बस्ने अनुमति दिए तर उनका श्रीमान्लाई घर गएर आइसोलेसनमा बस्न भनियो। दिन बित्दै जाँदा को’रोनाबाट मानिसहरुको मृ’त्यु हुनेको संख्या बढ्दै थियो तर उनकी छोरी प्याटन भने निको हुँदै गइन्। ‘श्रीमानले आफूलाई असहाय ठान्नुभएको थियो। पहिलो कुरा त छोरी समयभन्दा पहिलो जन्मेकी थिइन्। म पनि बि’रामी थिएँ। फेरि उहाँ श्रीमती र छोरीसँग बस्न पनि पाउनभएन,’ उनले भनिन्।
चिकित्सक र नर्समाथि विश्वास
अहिले ट्रेसी आफ्नी छोरीलाई लिएर घर फर्किसकेकी छन्। उनी र उनका परिवार चिकित्सक र नर्सहरुको खुलेरै तारिफ गर्छन्। ‘उनीहरुले साँच्चिकै अविश्वसनीय काम गरिराखेका छन्। ज्या’न जो’खिममा राखेर काम गरिरहेका छन्। उनीहरुले धेरै जो’खिम उठाएर मेरो छोरी भोकै नबसोस् भनेर काम गरे,’ उनले स्वास्थ्यकर्मीहरूको प्रशंशा गरिन्। स्वास्थ्यकर्मीलाई धन्यवाद दिने शब्द आफूसँग नरहेको पनि बताइन्। ‘मेरी छोरी मेरा लागि संसारको सबैभन्दा अमूल्य उपहार हो। मैले उसको रेखदेख उनीहरुकै भरोसामा छोडिदिएँ,’ उनी भन्छिन्, ‘यो कुनै पनि आमाको लागि सबैभन्दा ठूलो मुस्किल काम हो, त्यसैले नर्सहरूको भरोसा गर्नुस्।’ स्वास्थ्य खबर पत्रिका
Prevअमेरिकाबाटै निर्देशक भट्टराईले निश्चललाई भने- ‘राजेश हमालको अभिनय मापन गर्ने अधिकार छैन’
Nextजब उडिरहेको विमानमा ‘बम’ भएको सूचना आयो
जापानले विदेशी विद्यार्थीका लागि प्रवेश खुला गर्दै
त्यो समय जब लियोनेल मेसीले गोल गरे पछि माफी मागे
लकडाउनलाई मध्येनजर गर्दै यामाहाले ल्यायो सस्तो मूल्यमा बिशेष अफरका साथ १५० सिसीको SZR150 (मूल्य सहित)